Imandarmedia.com.np: नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्द दुवै तनावमा, गृहमन्त्री शर्मा किन छन् मौन ?
Main News, Newspaper » नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्द दुवै तनावमा, गृहमन्त्री शर्मा किन छन् मौन ?
नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्द दुवै तनावमा, गृहमन्त्री शर्मा किन छन् मौन ?
नेपाल प्रहरीका दुई विवादास्पद डिआर्इजी अहिलेसम्म तनावमा छन् । सरकारद्वारा आइजिपीमा नियुक्त र अदालतको निर्णयद्वारा जिम्मेवारविहीन डिआर्इजी जयबहादुर चन्दको कुनै विभाग छैन ।
त्यस्तै, अदालतले आइजिपीमा नियुक्त गर्न आदेश दिएर पनि सरकारद्वारा अस्वीकृत डिआर्इजी नवराज सिलवाल पनि बिदामा छन् । सिआर्इबी प्रमुखको पदमा यथावत् भए पनि उनी तनावले बिदामा छन् । सरकारले १ फागुनमा चन्दलाई आइजिपी बनाउने निर्णय गरेकोमा सोही दिन अदालतले सो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन आदेश दिएको थियो । पछि उनको नियुक्ति नै खारेज भएको थियो । त्यसयता उनले गृहमा हाजिर गर्दै आएका छन् ।
एआर्इजीमा बढुवा गरेर उनलाई जिम्मेवारी दिने आश्वासन दिइएको थियो । तर, हालसम्म एआर्इजी बढुवाको प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । एआइजी नहुँदा सबै विभाग निमित्तका भरमा चलेका छन् । प्रहरीमा कति एआर्इजी राख्ने भन्ने अन्योल छ । तीन वर्षअघि सरकारले तीनजना मात्र एआइजी राख्ने निर्णय गरेको थियो । हाल एआइजीका दाबेदारहरू धेरै भएकाले दरबन्दी थप्न दबाब छ ।
यस विषयमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा मौन छन् । उनले मन्त्रीमा नियुक्त भएकै भोलिपल्ट प्रहरीमा बढुवा अघि बढाइने बताएका थिए । बुधबारदेखि बढुवा त सुरु भएको छ, तर सर्इ तहको बढुवा अघि बढाइएको छ । बुधबार दुई सय सातजना असइलाई सर्इमा सिफारिस गरिएको छ । नेपाल प्रहरीमा डिआइजीको पद ६ महिनादेखि नै रिक्त छ । त्यस्तै, एसएसपी, एसपीलगायतका दर्जनौँ पद लामो समयदेखि रिक्त छन् ।
माथिल्लो पदहरू रिक्त भए पनि गृह र प्रहरी नेतृत्व बढुवामा चासो नदिँदा संगठनमा नैराश्यता बढ्दै गएको छ । असारभित्र बढुवाको प्रक्रिया सुरु नभए नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भए पनि कात्तिकपछि मात्र बढुवा गर्न पाइने प्रहरी नियमावलीको प्रावधान छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।